Elephorm တွင်တစ်ဦးက Activity ကိုအဆိုပါဗီဒီယိုသင်တန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Make
Posted by ကို Tranquillus | 31 ပင်လယ်, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
Elephorm ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိလေသာအာရုံစိုက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းသင်တန်းများကမ်းလှမ်းကြောင်း website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဂရပ်ဖစ်, အသံတည်းဖြတ်, ဘောင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အဖြစ်ခေါင်းစဉ် addressing ကိုသဘာဝကျကျဖှယျသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းနှင့်ပျော်စရာမှတဆင့်များနှင့်ကောင်းစွာထုတ်ထင်ဗီဒီယိုကိုလဲ tutorial တစ်ခုစီသင်ယူသူတစ်ဦးဧရာမြန်နှုန်းအားမိမိအသိပညာများပြားနိုင်ပါတယ်။
နှင့်နည်းနည်းလေးအားထုတ်မှုမပါဘဲ။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ကွန်ဖြူးရှပ်ကပညာရှိစွာပြောခဲ့သလို - "မင်းကစိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးပါ။ ပြီးတော့သင့်ဘ ၀ ရဲ့တစ်နေ့တာအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူး" ဤစကားသည် Elephorm ၏စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဒီနေ့ခေတ်အလုပ်ခွင်လောကတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများစွာကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်ဒီ site သည်အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချင်သူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
နိူးများအတွက် reserved တစ်ဦးကသင်ခန်းပလက်ဖောင်း
Elephorm ကိုအခြားသူများနှင့်မတူအောင် MOOC ပလက်ဖောင်းဖြစ်စေသည့်အရာမှာစိတ်အားထက်သန်မှုသည် ၄ ​​င်း၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျနားလည်သဘောပေါက်သေချာစေရန်, သင်လေ့လာသင်ယူသောအရာကိုချစ်ကြတယ်။ လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံပြီးအလိုလိုသိသောပညာရေးသင်ကြားမှု၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီ site ကသင့်ကိုအားဖြည့်ပေးရုံသာမက ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု သငျသညျဆင်းရဲသောနှင့်အပေါ်ယံအကြောင်းအရာကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်။
ဆရာများသည်လည်းယင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အခြားစိတ်အားထက်သန်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်တူညီသောဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းသည် Elephorm ၏အားကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ယူသူနှင့်သင်တန်းဆရာများအကြားဆွေးနွေးမှုများကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် e-learning သင်တန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သောလူမှုရေးအထီးကျန်မှုကိုမခံစားရဘဲအဝေးမှသင်ယူခြင်းမှအကျိုးရရှိသည်။ ဒီအမျိုးအစားရဲ့အဆုံးကိုသွားဖို့လိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုသင်သိတဲ့အခါမယုံနိုင်လောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်။
အများအပြား software ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူဖို့ပျော်စရာလမ်း
ဒါကြောင့် (Adobe Premiere Pro ကိုနဲ့တူဆော့ဖျဝဲနှင့်အတူ) ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အစီအစဉ်များကိုဖွင့်သို့မဟုတ် (အဓိက Photoshop ကို CC ကိုနှင့်အတူ) ဓာတ်ပုံကို Montage ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်သင်တန်းများတစ်ခုအကွာအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဿုံအရှိဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ software ကိုရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်သင့်အဆင့်အထိအဆင်ပြေအောင်တစ်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ရေး, တညျဆောကျနိုငျသညျ။
အကယ်လို့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ၊ အသံအင်ဂျင်နီယာ၊ ပရိုဂရမ်မာ (သို့) ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူဖြစ်ချင်ရင်ဒီဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုလောကမှာသင့်အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေမရှိတော့ဘူး။ ဤအလားအလာရှိသောအလုပ်များကို Elephorm မှပေးသောလေ့ကျင့်မှုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သင်ယခုလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာသည်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်နေထိုင်ရန်အိပ်မက်ကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုကလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကနေကနေလက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာထို့ကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ သငျသညျ, ဒီလမ်းအတွက်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ Elephorm သင်တန်းအားလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ အားလုံး subscriptions ကိုတစ်ဦးန့်အသတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပလက်ဖောင်းအာမခံပါသည်။
ပိုများသော 40 000 လဲ tutorial Elephorm အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးဤမျှလောက်များစွာသောအခွင့်အလမ်းများကိုသင်လာအောင်နှိုးဆွသောဒေသများရှိတစ်ဦးစတင်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးကိလေသာတိုက်ဖျက်မည်မှမကြောက်ပါနှင့်။ သင့်ရဲ့အရသာနှင့်သင့်အကျိုးစီးပွားအညီကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးခံစားပါ။ အွန်လိုင်းသင်ယူမှုပျော်စရာမဟုတ်ခဲ့သူကားအဘယ်သူပြောပါတယ်?
ဖတ်ရန် ဘဏ္ဍာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေး, လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန်
သင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုဝိညာဉျသရှိပါကသင်သည် Elephorm အပေါ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုမရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုအမှန်ပင်အရောင်းအအတော်များများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိပညာကြွယ်ဝစေ, ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအပြင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ဆောက်ရန်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
Elephorm အတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟာဗျူဟာချမှတ်နိူးဖို့အဓိကအားဖြည့်တင်းကြောင်းသင်တန်းတွေပေးခွငျးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အခြားအသင်ခန်းသင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သောသင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကွိုးစားဘယ်မှာလဲ, Elephorm, သူသည်သင်တို့ကိုလိုက်နာချင်သင်ယူခြင်း၏စိတ်ခံစားမှုဘက်မှာအစားအလေးပေး။ ပလက်ဖောင်းထိုမှတပါး, ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါးညှို့ဗီဒီယိုကိုကမ်းလှမ်းရန် exploit, အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းဆရာအနေဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ၏အရည်အသွေးကျေးဇူးတင်ပါသည်, သတင်းအချက်အလက်ကိုသိုထားသောတစ်ဦးလေပြေဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးနှံသူတို့၏ဗီဒီယိုလဲ tutorial ၌သင်တို့၏ဆရာ, ဆရာမများကသက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူဖြစ်ကောင်းရှာပါ။ သငျသညျမြားကိုလညျး Elephorm 100% ကျေနပ်ဖို့အလျင်အမြန်တတ်နိုင်သမျှအသစ်သောအသိပညာဆည်းပူးချင်လျှင်။ ယင်း၏ catalog ၏ကျယ်ပြန့်သငျသညျတီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအနည်းဆုံးလိုအပ်သောမည်သည့်ဘာသာရပ်၌သင်တို့၏အသိပညာကိုချဲ့ထွင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူအလျင်အမြန်သင်သည်အိပ်မက်မက်သောအလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြား Get ။
တစ်ဦးကအပြည့်အဝ subscription ကိုကုန်ကျစရိတ်
၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ပညာရေးကိုရန်ပုံငွေပေးရန်အကြွေးမတင်ရန်မကြောက်ပါနှင့်။ တစ်လကိုယူရို ၂၀ လောက်သာကုန်ကျမှာပါ။ ဒီပမာဏဟာ Elephorm ရဲ့ဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ရေး catalog ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိပ်မများလှပါဘူး။ သတိရပါ - သောင်းနှင့်ချီသောသင်ခန်းစာများကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာမဆိုရရှိနိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းများ၏အရည်အသွေး / အဘိုးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ site ၏အမျိုးမျိုးသော features တွေစမ်းသပ်ဖို့လစဉ်ကမ်းလှမ်းမှုကို။ ဒီအတွေ့ကို web ဖွဲ့စည်းမှု၏အရည်အသွေးစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များစုံလင်ဖို့ရေရှည်ကတိကဝတ်များအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီ၎င်း၏သင်တန်း၏အရည်အသွေးကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါ Elephorm စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဿုံသင့်လျော်မယ့်အထုပ်ပါပဲ။
Elephorm တွင်တစ်ဦးက Activity ကိုအဆိုပါဗီဒီယိုသင်တန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Make ဇန်နဝါရီလ 6th, 2020Tranquillus
အောက်ပါအဆိုပါနာမည်ကြီးစာလုံးပေါင်းပြိုင်ပွဲသည် Project မှဗော်တဲယားကိုသင်ရထား
Maxicours: စျေးပေါအွန်လိုင်း tutoring ၏ရည်ညွှန်း